काका र फुचुंग्री २०७१ फागुन २ | Saugat : Naya Yougbodh
फुचुंग्री : आजभोलि त क्या मज्जा छ हौ काका । कैले प्रपोज डे, कैले किस डे, कैले हग डे, कैले भ्यालेन्टाइन डे । यो सर्खार नि खत्तमै पो रै’छ काका । बिदाचाहिं भ्यालेन्टाइन डे मा मात्रै रे । यो सर्खार त गतिलो लागेन काका ।
काका : “धाकभन्दा धक्कु ठूला, हिड्ने बेला खुट्टा लुला” भनेजस्तो गर्ने हैन है फुच्ची । “झिङ्गापुर”मा बसेर “सिङ्गापुर”को सिको गर्ने होइन ह्याँ! पढ्ने, लेख्ने र राम्रो काम गर्ने बेलामा चाहिं विदेशीको सिक्ने नसिक्ने ? विदेशीका जे–जे खराबी छन्, ती चाहिँ ट्याक्कै टिपिहाल्ने ? एकैदिन बिदा पनि बढी भो । बुझिस् ?
फुचुंग्री : अनि हाम्रा नेता अङ्कलहरुले त कमालै गर्ने भए नि काका ? पहिलो संविधानसभामा एउटा पनि संविधान दिन सकेनन् । यसपालि त दुइटा संविधान पो दिने भए त । विपक्षीहरुले उपसभामुख ओनसरी घर्तीको अध्यक्षतामा “समानान्तर संविधानसभा” को बैठक पो बसाल्ने रे त ?
काका : “कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा” भनेको यै त होला फुच्ची । दुईवटा संविधानसभाका दुईवटा बैठक बस्न थालेपछि त आउने त दुईवटै संविधान आउने भए । दुईवटा आए त ठिकै थियो । “न ऊ, न ऊ हातैभरि गुहु” होला भनेर पो म बूढालाई डर लागेको त !
फुचुंग्री : अनि हाम्रो एमाओवादी नाम गरेको पार्टीले त देश खोजी बगाल रोजी विवादित छवि भएका ल्हारक्याल लामालाई पो सभासद् बनाएछ काका । आफूहरुले संविधानसभा छोडेर हिडेको अवस्थामा कहाँका लामालाई टप्प टिपेर संविधानसभामा छिराएछन् हँ ? “कुन गतिको मति, घट्टमा हालेर झन घटी” भनेको यै हो कि क्या हो ?
काका : “ओरालो लागेको मृगलाई बाच्छाले नि खेद्छ” भन्छन् फुच्ची । तेरा एमाओवादीका अङ्कलहरुलाई आजभोलि के भाको छ कुन्नि ? बाच्छादेखि साँढेसम्म सबैले खेदिरहेका छन् । अनि आफूहरुले नि कामचाहिं उस्तै उस्तै गर्छन् । गर्ने के ?
फुचुंग्री : हाम्रा देशका नेताहरुले सिन्कोसमेत भाँच्न नसक्ने भए काका । अब भारतको नयाँ दिल्लीमा केजरीवालले “झाडु” कुचो लगाएर बीउ नै नरहने गरी बढारेझैं बढार्न मिल्दैन यता पनि ?